Zon'olombelona · Novambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Novambra, 2011
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Novambra, 2011
Emira Arabo Mitambatra: Nantsoina Hatao Fanadihadiana Ilay Vehivavy Mpampiasa Twitter Atao hoe Rowda Hamed
Vehivavy iray mpampiasa Twitter, antsoina hoe Rowda Hamed (@Rowda_Hamed), avy ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra no nibitsika ka nilaza fa nahazo fiantsoana hatao fanadihadiana. Izy no iray amin'ireo mpampiasa Twitter vitsivitsy avy ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra mpanohana ireo mafàna fo miisa dimy izay voafonja ary nanao fitokonana tsy hihinan-kanina vao tsy ela akory izay. Indreto ny hetsika tao amin'ny Twitter momba ny fantsoana azy.
Korea Avaratra: Mampatahotra an'i Kim Jong Ve Ny Famonoana Natao An'i Gaddafi?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Novambra 2011
Koreana Tavaratra nitsoaka ny fireneny lasa mpanao gazety manoratra ao amin'ny bilaogy antsoina hoe North Korea RT (Real Talk) i Joo Sung. Teraka tao Korea Avaratra Andriamatoa Joo ary nahavita fianarana ambony tao amin'ny oniversite Kim Il-sung, iray amin'ireo oniversite manan-danja indrindra ao Korea Avaratra. Niala tao an-tanindrazany izy ny taona 1998 ary...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Novambra 2011
Tonizia: Nampizarazara Ireo Toniziana Mpiondana Aterineto Ny Famonoana Toniziana Iray Tao Iraka
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Novambra 2011
Nampizarazara ny Toniziana mpiondana aterineto ny namonoana an'i Yosri Trigui, Toniziana iray voampanga ho mpampihorohoro. Mpampihorohoro nahazo izay mendrika azy, sa tanora niharan'ny fandrebirebena, sy fitsarana tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena? Vakio ny angona nentin'i Read Afef Abrougui avy amin'ny fanehoan-kevitr'ireo Toniziana mba hahafantaranao azy.
Azia Afovoany sy Kaokazy 19 Novambra 2011
Olana tsy azo noresahina nandritry ny fotoana ela ny herisetra an-tokantrano teo anivon'ny fiaraha-monina Armeniana. Fa tamin'ny vono nahafaty an'i Zaruhi Petrosyan, 20 taona, nataon'ny vadiny sy ny rafozany taminy ny volana Oktobra lasa teo, dia nahasintona olona sy fikambanana maro ity resaka ity, izay mihatra amin'ny mihaotra ny iray ampahefatry ny vehivavy ao Armenia.
Koety: Fanentanana Amin'ny Lahatsary Mba Hampianarana Ny Olom-pirenena Ny Momba Ny Lalampanorenana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Novambra 2011
Hanamarihana ny tsingerintaona faha-49 nisian'ny Lalampanorenana Koetiana, nanapa-kevitra ny vondrona mafàna fo vitsivitsy mba hampahatsiahy ny vahoaka ireo votoaty samihafa ao anaty lalampanorenana. Eo ambanin'ny lohahevitra hoe Tadry[ar] (Mba fantatrao va re?), Sout Al-Kuwait (Feon'i Koety) dia namokatra lahatsary enina, maharitra segondra vitsy eo avy, hanazavàna amin'ny vahoaka andalana enina notsongaina avy ao amin'ny lalampanorenana.
Eoropa Andrefana 17 Novambra 2011
Bahrain: Nanitsaka ny Mpanao Fihetsiketsehana Ve Ny Fiaran'ny Polisy?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Novambra 2011
Nolazain'ny fitondrana ao Bahrain fa araka ny lalàna iraisampirenena no ifehezany ny mpanao fihetsiketsehana. Saingy nanangom-baovao na nandrakitra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mitranga any kosa ny mpisera ka mametraka ireny an-tserasera ho hitan'izao tontolo izao. Ato amin'ity lahatsoratra ity no anangonan'i Mona Kareem ny lahatsary nivoaka an-tserasera mampiseho ny ataon'ny polisy mandòna (manosy na manitsaka) ny mpanao fihetsiketsehana. Kisendrasendra ve ny hanosen'ny fiaran'ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana?
Tonizia: Fitsikerana Tafika Nampiditra Roa Volana An-tranomaizina
Tamin'ny 9 Novembra, Nabil Hajlaoui, mpahay fambolena sy fiompiana avy ao Sidi Bouzid, voampanga higadra roa volana an-tranomaizina noho ny fitsikerany ny andrim-panjakana miaramila Toniziana. Araka ny voalazan'i Houssem Hajlaoui, mpanoratra ny bilaogy iombonana Nawaat, nosamborina i Nabil Hajlaoui taorian'ny lahatsoratra navoakany, izay nanomezany tsiny ny tafika noho ny fikomiana vao haingana...